चुनावी माहौलमा द भ्वाइस अफ नेपालको उत्कृष्ट चार प्रतिस्पर्धीहरू - Naya Online
चुनावी माहौलमा द भ्वाइस अफ नेपालको उत्कृष्ट चार प्रतिस्पर्धीहरू
शुक्रबार, साउन २२, २०७८ (August 6th, 2021 at 1:33pm ) ग्लामर न्युज
ललितपुर, २२ साउन । शनिबार हुँदै गरेको द भ्वाइस अफ नेपालको ग्राण्ड फिनालेमा विजेता बनाउन आ–आफ्ना आफन्त र फ्यानहरूले अभियान नै छेडेका छन् ।
उत्कृष्ट चारमा ज्वाला राई, तारा श्रीस मगर, किरण गजमेर र आर्यन तामाङ छन् । उनीहरूलाई जिताउन समुदाय, क्षेत्रबाट लागिरहेका छन् । राई भोजपुरका हुन् । त्यसैगरी मगर बाग्लुङको, गजमेर अमेरिका र तामाङ दार्जिलिङका हुन् ।
नेपालको पूर्वी भेग भोजपुरका ज्वाला राईलाई यसैक्षेत्रका बासिन्दाले विजेता बनेको हेर्न चाहेका छन् । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै उत्कृष्ठ आठमा पुग्दा शुभकामना दिएको समाचार आएको थियो । खोटाङमा एलबी मगरको संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय ज्वाला राई जिताऔं अभियान गठन भएको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँमा पनि हाङ चेम्जोङको संयोजकत्वमा ज्वाला राई जिताऔ अभियान बनाई उपत्यकामा दुईपटक पैदल र्‍याली निकालेको छ ।
हिजो मात्रै उक्त अभियानले तपाईहरूको घरदैलोमा हामी ज्वाला राईको लागि एक भोट माग्दै पैदल यात्रा गर्दैछौं कृपया ज्वाला राईलाई जिताऔं भन्ने नारा लगाउँदै र्‍याली निकालेका थिए ।
ज्वालालाई नै किन जिताउने भन्ने नयाँ अनलाइनको प्रश्नमा संयोजक चेम्जोङले द भ्वाइस अफ नेपालको गायक गायिकाहरू सबै उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि ज्वालाको फरक आवाज भएको र अहिलेको सांगीतिक बजारलाई आवश्यक आवाज भएको हुँदा उनलाई जिताउन चाहेको बताउछन् ।
अर्का फाइनलिस्ट तारा श्रीष मगरको समर्थक पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । उनको समर्थनमा केहिदिन अघि न्युयोर्कको म्यानह्वाटन शहरस्थित टाइम्स स्क्वायरमा टिम राजु ! भोट फर तारा भन्दै ¥याली गरिएको थियो । त्यस्तै बाग्लुङमा पनि उनका समर्थकले ¥याली निकालेका छन् र फेसबुकमा फ्यान पेजहरू निर्माण गरेर तारालाई जिताउन लागिपरेका छन् ।
फरकफरक जनराको गीत गाउन सक्ने क्षमता भएकी तारा शालैज्यू गाएर फाइनल चरण प्रवेश गरेकी थिइन् । उक्त शालैज्यूले नै लाखौं स्रोताहरूको मन जित्न सफल भएकी थिइन् ।
सबैभन्दा कान्छा प्रतिस्पर्धीका रूपमा चिनिएका दार्जिलिङका आर्यन तामाङ पनि विजेताको उक्तिकै दावेदार हुन् ।
आर्यनले बाल्यकालदेखिनै गाउँदै आएको उनका साथि सरगम विशाल तामाङ बताउछन् । आर्यन र विशाल सेन्ट रोर्बट हाइस्कुलको कक्षा–५ मा सँगै भर्ना भएका थिए । “आर्यनले उतिबेलै स्टेज चढेको हो ।”– विशाल बताउछन् ।
अहिले दार्जिलिङका सहरहरूमा आर्यनका लागि व्यानरसहित क्याम्पियन सञ्चालन गरिएको छ । “लेट् सपोर्ट आर्यन” भनेर ह्वाट्र्स एप ग्रुप खोलिएको छ । उक्त ग्रुपमा २०० जति सदस्यहरू छन् । सेन्ट रोबर्टका भूतपूर्व विद्यार्थीहरूले पनि सहयोग गरिरहका छन् । तर, नेपालबाट जसरी प्रत्यक्ष भोट दिन नमिल्ने र प्रभु पे एपबाट सबैले भोट गर्न नजान्ने भएको हुँदा अलि असहज भएको बताउछन् ।
आर्यनका समर्थक नेपालमा पनि प्रसस्तै भएको हुँदा आर्यन विजयी बन्छन् भन्नेमा दार्जिलिङवासी विस्वस्त छन् ।
किरण गजमेरको पनि उत्तिकै चर्चा छ । उनका समर्थकहरूले जित सुनिश्चित भन्दै अग्रिम बधाई दिइरहेको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीमा जन्मिएका गजमेर देशको खोजीमा रहेका आवाज भनेर सहानुभूति पनि जितिरहेका छन् ।
गजमेरका समर्थकले पनि देश तथा विदेशमा र्‍याली लिकालिरहेका छन् । केहिदिन अघि हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई भोट गरौं भन्दै पथरी लगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा र्‍याली निकालिएको थियो ।
भोट गर्ने समय एक दिन मात्रै बाँकी छ । सबै प्रतिस्पर्धीहरूका समर्थकहरू उत्तिकै सक्रिय भएको सबै प्रतिस्पर्धीहरू विजयको नजिकै छन् ।
ज्वाला राईको लागि निकालिएको र्‍यालीको भिडियो हेर्नुहोस्